यस्ता मानिसहरुलाई कहिले पनि मिल्दैन लक्ष्मीको साथ, कंगाल भएरै बित्छ जीवन ! « Nipolnews
यस्ता मानिसहरुलाई कहिले पनि मिल्दैन लक्ष्मीको साथ, कंगाल भएरै बित्छ जीवन !
संसारमा विभिन्न धर्मका मान्छेहरु बसोबास गर्ने गर्छन । हरेक धर्ममा कुनै पनि व्यक्तिलाई जीवन जिउनका लागि फरक तरिका बताइएको हुन्छ । कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्ति आफ्नो धर्मका नियम पालना गरि जीवन चलाउने गर्छ ।
आफ्नो धर्मले सिकाएको बाटो हिड्न नसक्दा धेरै मनिसहरुले अन्जानमा गल्ति गर्न सक्छन । त्यस्ता गल्तीहरुलाई कुनै पनि मान्छेले जीवनभर सजाय भोग्नुपर्दा जीवनमा आफूले सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सम्भब हुँदैन । हरेक व्यक्तिको इच्छा चाहना भनेको जीवनमा कुनै दिन अन्न ,बस्त्र र वासको अभाब नहोस् । तर जीवनमा यी कुराहरुको अभाब भएको समयमा मान्छेहरु आफ्नो धर्म बिर्सिन पनि सक्छन ।
यदि कुनै व्यक्ति धेरै धन सम्पति कमाउने सपना बोकेर आफ्नो धर्म बिर्सिन्छ भने उसको जीवन बेकार हुन्छ । जीवनमा आफ्नो धर्म बिर्सेर इज्जतको हेक्का नराखी कमाएको सम्पतिको कुनै अर्थ रहने छैन । यसरी आफ्नो धर्म बर्सेर कमाएको सम्पति कुनै दिन नष्ट भएर जान सक्छ भने धर्मको नियममा बसी कमाएको पैसा सत्यको धन हुनेछ र तेस्ले जो कोही व्यक्तिको जीवन सुखी र खुशी राख्नेछ ।
जुन व्यक्ति जीवनमा अधिक धनसम्पति कमाउने सोच राख्ने गर्छ,उसले जीवनमा गलत बाटो रोज्न् सक्छ । यस्तो सोच राख्ने मान्छेको जीवन निश्चित रुपमा पतन हुने गर्छ । गतल बाटोमा लगेर कमाएको धन कुनै पनि व्यक्तिले जोगाउन सक्दैन तर सच्चा व्यक्तिले जीवनमा आफ्नो कडा परिश्रमले प्रसस्त धन कमाउन सक्छन् र जीवन सफल बनाउन सक्छन ।
जीवनमा हामी थुप्रै साथीहरुको संगत गर्छौं । तर यसरि आफूले संगत गर्ने साथीहरुको मन बुज्न नसक्दा कोहीबेला आफूलाईनै अफ्ठ्यारोमा पार्न सक्छन । कुनै व्यक्तीसँग संगत गर्नु अगाडी असल र खराबको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । कसैलाई आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्ने बानीले तपाईहरुले जीवनमा पटक -पटक धोका पाउन सक्नुहुन्छ ।
जीवनमा धेरै समय नशाको बस्न रुचाउने व्यक्तिले जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्दैन र नशा सेवन गर्ने बानीले तिनीहरुको स्वस्थमा समेत ठुलो असर पार्ने गर्छन । यस्ता मान्छेहरुको चरित्र समेत खबर हुन्छ र जीवनमा कुनै सफलता हासिल गर्न सक्दैनन् ।
अधिक धन सम्पति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरु धेरै घमण्डी हुने र आफू भन्दा दोस्रो व्यक्तिलाई नगन्ने अर्थात अरुको केही कुरा नसुन्ने गर्छन् । यसरि घमण्ड गर्ने व्यक्ति बिस्तारै धन सहित आफै समेत पतन भएर जान सक्छन । कुनै दोस्रो व्यक्तिको समेत सल्लाह लिएर अगाडी बढ्ने मान्छेले जीवनमा ठूलो सफलता हात पार्न सक्छ ।